Madaxweynaha Soomaaliya oo soo gaabiyey socdaal uu ku joogay Koonfur Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu soo gaabiyey socdaal uu ku joogay dalka Koonfur Afrika, halkaasoo uu uga qeybgalay caleemo saarka madaxweynaha dalka Jecob Zoma.
Madaxweyne Xasan oo berri oo isniin ah kusoo laaban lahaa Muqdisho ayaa sheegay inuu manta oo axad kuso laabanayo caasimadda, maadaama Alshabaab shalay weerar ku qaadday baarlamaanka Soomaaliya.
“Socdaalkii aan ku joogay Koonfur Afrika waan soo gabiyey, maalinta Isniinta ah inaan Muqdisho imaado ayay aheyd, laakiin axadda inaan dalka soo gaaro ayaan rajeynayaa” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweyne oo la hadlay Radiyowga dowladda isagoo ku sugan dalka South Africa ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay ciidamadii ku geeriyootay iyagoo difaacaya xarunta golaha shacabka ee Muqdisho.
“Dhalinyaradii shuhadada ahaa ee geesiyada ahaa ee geeriyootay iyagoo daafacaya sharafta ummadda iyo hey’ada qaran ee baarlamanka ayaan tacsi u dirayaa ehelkoodi, iyo ciidamadii ay ka geeriyoodeen, geesinimada uu muujiyay Kabtan Daahir Gurxan Maxamuud oo hor istaagay baabuurkii qarxayay waxey tilmaameeysa dhiiranaanta iyo geesinimada ciidamada” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Shabaab ay doonayaan iney dhantaalaan dowladnimada Soomaaliyeed, isagoo intaa ku daray ineysan dowladdu ku niyad jebi doonin falalka Alshabaab, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dhacdadi shalay iyo kuwii ka horeeyaba ay dowlada Soomaaliya wax ka baraneyso.
“Waxaan rabaa umadda Soomaaliyeed inaan u sheego ineey kalsooni buuxda ku qabaan dowladooda iyo ciidamadoodaba, xiligaano kale oo la dhibanyahay waa xiliga isku duubnaan iyo midnimo loo baahanyahay, waa xilliga cadowgu kaga faa’ideysto inuu keeno wax umadu ku kala qeybsami karaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxwenaha.
Madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in saacadaha soo socda uu dhici doono isbedel, isagoo tilmaamay in talaabooyin cad cad ay qaadi doonaan mas’uuliyiinta dalka.
“Waxaa kaloon rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego in saacadaha soo socda isbedel dhacayo kaaso bilow ah, kuwo kaloo farabadana ay kusoo xigi doonaan, talaabo cad ayaa msa’uuliyiinta dalku ay qaadi doonaan, waxaana u bahaanahay xilligan midnimo iyo isku duubnaan” ayuu yiri madaxweynaha.
Waxaa weerarka dhacay dartiis isu casilay wasiirkii Amniga Qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, kadib markii intuu uu xilkaas hayey ay dhaceen weerarro lala beegsaday xarrumasha muhiimka ah ee dowladda Soomaaliya.